Ny vahiny niresaka tamin'ny Breziliana. Manambady Breziliana
Ny vahiny niresaka tamin’ny Breziliana. Manambady Breziliana
Alex sy ny alpha miresaka momba ny ny endriky ny fiainana ao Brezila sy Brezila sy ny fahasamihafana eo amin’ny Breziliana sy ny Breziliana tovovavy.
Eto aho amin’izao fotoana izao amin’ny alpha. Alpha Breziliana, velona izy ao Brezila hatramin’ny fahaterahana sy ny nanambady Breziliana tovovavy. — (Alfa) Fa ao, dia nipetraka tao amin’ny Facebook. Nisy namako iray noforonina ny vondrona iray, ary ny ho avy tovovavy nivoaka ny fanehoan-kevitra ao, ary hoy aho taminy. Avy amin’ny fotoana izay dia nanomboka miresaka amin’ny teny anglisy sy portiogey, ny fampiasana ny mpandika teny fandaharana. — (Ka) Ary avy eo dia izany rehetra kofehy, twirled, ary avy eo dia nitsidika ny eto voalohany na manana ianao mbola tonga tany Brezila.
— (Alfa) Izany voalohany
Niresaka tamin’ny Facebook ny momba ny volana, ary nandritra ny fety dia tonga eto.
Ny voalohany dia tamin’ny volana aogositra
Ary tamin’izay fotoana izay aho dia tena niresaka Breziliana, ary izy no tsy miteny portiogey. — (Alfa) dia Ratsy, satria efa nampianarina ny zavatra teny. Ary ny rafitry ny anarana sy ny Breziliana teny, raha ny hevitro, tena mitovy. Tsy sarotra ny hahatakatra ny zavatra nolazainy. Ary izay aho nilaza hoe, izy, koa, dia mora ny hahatakatra. — (Alex) Ahoana no nianatra ny fiteny ary izany mafy. Hoy ianao: ny vadiko ny Breziliana, na malagasy, na ny teny portiogey. — (Alfa) Ankehitriny isika dia miresaka amin’ny teny portiogey sy Breziliana. Miezaha miresaka kokoa amin’ny teny portiogey, satria ny vadiny monina eto ary izy dia ny ara-pahasalamana.
Rehefa nianatra ny fiteny
Nandeha ho any amin’ny mpivarotra, nividy boky iray sy ny zava-drehetra. Ahy ho toy ny Breziliana dia ilaina mba hahatakarana ny toe-tsain’ny lehilahy Breziliana, Eny. Ary ny vadiko, tsirairay avy, koa dia mila mahatakatra ny fomba Breziliana no mieritreritra fa fototra. Raha toa ka tsy hahatakatra ny fomba ianao, Breziliana iray, mahafantatra izao tontolo izao, dia mety ho tena sarotra ny mifandray amin’ny fampiasana fotsiny ny fitsipi-pitenenana. Misy fomba afa-tsy hahatakatra ny olona izay miteny Breziliana, sy ny zavatra toy izany koa ny toe-draharaha. Ary nieritreritra aho hoe,»Raha tsy mahatakatra ny Breziliana ny fiteny, ny fifandraisana dia ho azo». — (Alfa) Dia nanapa-kevitra aho fa handeha aho mba hianatra ny Breziliana teny. Ary ao Brezila ny voalohany dia tena sarotra, tsy dia ampiasaina amin’ny zava-misy, fa amin’ny alalan’ny isan-kerinandro aho, dia nahatsapa ho maimaim-poana. — (Alfa) Afaka miresaka amin’ny olona eo an-dalana handeha ho any amin’ny fivarotana mba hividy zavatra iray, sy ny sisa. Nahatsapa ho afaka sy tsy afaka mifanerasera malalaka amin’ny olona. — (Alex) somary feno fihantsiana fanontaniana, saingy, mino aho fa ianao mahalala ny valiny. Inona no mampiavaka ny vehivavy Breziliana Brezila: ny sasany fahalalam-pomba, ny zavatra tsikaritro. Alohan’ny izay ianao te hahafantatra ny Breziliana tovovavy. Ho fampahalalana bebe kokoa, raiso amin ny fantsona YouTube
← Ahoana izy dia tonga mba hanambady Breziliana
I brezila chat - hiresaka amin'ny olon-tsy fantatra-ny lahatsary amin'ny chat room →